Optical Fiber Cable Reinforcement စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် China Cable Phosphatized Steel Wire | တစ်ကမ္ဘာ
Optical Fiber Cable ကိုအားဖြည့်ခြင်းအတွက် Phosphatized Steel Wire
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T, L / C, D / P စသည်။
ပို့ဆောင်ချိန် ရက်ပေါင်း ၂၀
တင်ပို့မှုဆိပ်ကမ်း ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်
HS ကုဒ် 7229909000
ထုပ်ပိုး သေတ္တာဘူးသို့မဟုတ်သစ်သားသေတ္တာ၊ ၅၀ ကီလိုဂရမ် / ထုပ်ပိုးခြင်း (သို့) သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အရ
Optical fiber cable အတွက် phosphatized သံမဏိဝါယာကြိုးကိုအရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောပုံဆွဲခြင်း၊ အပူကုသခြင်း၊ ချဉ်ခြင်း၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊
phosphorized သံမဏိကြိုးသည်ဆက်သွယ်ရေး optical cable များတွင်အသုံးပြုသောအခြေခံအစိတ်အပိုင်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် optical fiber ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် optic cable လိုင်းများတင်ခြင်းအတွက်အကျိုးရှိသည့်အရိုးစုကိုကွေးခြင်း၊ ပံ့ပိုးခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပြီးတည်ငြိမ်သော optical cable အရည်အသွေးရှိခြင်း၊
Optical cable ၏အဓိကအသုံးပြုသောသံမဏိဝါယာကြိုးသည်အခြေခံအားဖြင့်အတိတ်က galvanized သံမဏိကို phosphatized steel wire ဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီး၎င်း၏အရည်အသွေးသည် optical cable သက်တမ်းကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ phosphatized သံမဏိဝါယာကြိုးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် optical cable ရှိအမဲဆီနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုမရှိပေ။
ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသော optical cable အတွက် phosphatized သံမဏိကြိုးသည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။
၁) မျက်နှာပြင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးသန့်ရှင်းပြီးအက်ကြောင်းများ၊ ကုန်းမြေများ၊ ဆူးများ၊ ချေးခြင်း၊ ကွေးခြင်းနှင့်အမာရွတ်စသည့်ချွတ်ယွင်းမှုများကင်းသည်။
၂) ဖော့စဖိတ်တိတ်သည်တူညီသည်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ တောက်ပပြီးပြိုလဲခြင်းမရှိပါ။
၃) ပုံပန်းသဏ္isာန်သည်တည်ငြိမ်သောအရွယ်၊ မြင့်မားသောဆန့်နိုင်စွမ်း၊ elastic modulus နှင့် elongation နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုပြင်ပဆက်သွယ်ရေး optical cable များဗဟိုသတ္တုအားဖြည့်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
min. ဆန့်နိုင်အား (N/ မီလီမီတာ2)
min. ဖော့စဖိတ်ရုပ်ရှင်၏အလေးချိန် (ဆ)/ မီတာ2)
elastic ကိန်းပကတိတန်ဖိုး (N / မီလီမီတာ2)
အကြွင်းအကျန် elongation (%)
မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆန့်နိုင်မှုအားဖြင့်ဖော့စဖိတ်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဝါယာကြိုးများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
၁။ သန့်ရှင်းသော၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော၊ ခြောက်သွေ့သောသိုလှောင်ရုံတွင်သိုထားရမည်။
ရှေ့သို့ Cable ကြိုးအတွက်သွပ်ရည်စိမ်သည့်သံမဏိကြိုး
နောက်တစ်ခု: Polyester Glass Fiber တိပ်
A: ခင်ဗျားတို့ရောက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်။ ငါတို့စက်ရုံကိုလာဖို့မင်းကိုခေါ်သွားမှာပါ။
A: သင်ပုံမှန်စုံစမ်းလိုသောကြေးနန်းပစ္စည်းများအတွက် ၂၄ နာရီအတွင်းကိုးကားသည်။ အကယ်၍ သင်စျေးနှုန်းရရန်အလွန်အရေးကြီးနေလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းကို ဦး စားပေးဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပါသို့မဟုတ်သင်၏အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
A: သစ်သားစည်၊ အထပ်သား pallet၊ သစ်သားသေတ္တာ၊ ပုံးများရွေးချယ်ရန်အတွက်၊ မတူညီသောပစ္စည်းသို့မဟုတ်သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။
A: T / T, L / C, D / P စသည်။ ငွေလက်ကျန်မတိုင်မီထုတ်ကုန်များနှင့်အထုပ်များ၏ဓါတ်ပုံများကိုသင်ပြပါမယ်။
ဖြေ။ ။ EXW၊ FOB၊ CFR၊ CIF ။ သင့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
A: ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၇ ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်းကြာလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မည့်အချိန်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အရေအတွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
A: သင်၏စမ်းသပ်မှုများအတွက်နမူနာရရှိနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့နမူနာကိုလျှောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။
A: ၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏အကျိုးကိုသေချာစေရန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းသည်။
Q9: သင်ထုတ်လုပ်သည့်ကြိုးများအရ cable ပစ္စည်းများအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပါသလား။
ဖြေ။ ။ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုနိုင်ရန်အတွက်ကေဘယ်လ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်ပါ ၀ င်သောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာရှင်ရှိသည်။
ဖြေအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစည်းခြင်း။ ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်းဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်ခြင်း။
အမြတ်အစွန်းသေးသော်လည်းအမြန်လည်ပတ်မှု။ ။ ဖောက်သည်များ၏ကေဘယ်ကြိုးများကိုစျေးကွက်တွင်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးလျင်မြန်စွာတိုးတက်စေသည်။
Optical Cable အတွက်ဖော့စဖိတ်သံမဏိကြိုး
Optical Cable အားပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် Phosphated Steel Wire
ဝါယာကြိုးနှင့် Cable ကိုများအတွက် Aramid ကြိုး, Optical Fiber Cable ကိုအစုအဝေး
Optical Fiber Cable အတွက်ဖိုက်ဘာအားဖြည့်ပလပ်စတစ် (FRP) လှံတံများ